» वि’धान महाधिवेशन- पार्टी र मदन भण्डारी भन्दा ओली ‘ब्राण्ड’ ठुलो ! वि’धान महाधिवेशन- पार्टी र मदन भण्डारी भन्दा ओली ‘ब्राण्ड’ ठुलो ! – हाम्रो खबर
वि’धान महाधिवेशन- पार्टी र मदन भण्डारी भन्दा ओली ‘ब्राण्ड’ ठुलो !
काठमाडौँ । आजदेखि गोदावरीमा भइरहेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनस्थलको संरचनादेखि सामाग्रीसम्ममा पार्टीलाई भन्दा बढी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ब्राण्ड बनाइएको छ । विधान महाधिवेशनमा दे¥खिएका दृश्यहरूले एमालेमा ओली नै हाबी देखिएका छन् ।
कार्यक्रमको हल बाहिर केही स्था¥नमा पार्टीका पूर्व महासचिव मदन भण्डारीले स्थान पाएका छन्। संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसम्म गायब छन् ।
एमालेले महाधिवेशनको मु¥ख्य मञ्चमा पार्टीले कार्यक्रमहरूमा मञ्चमै आफ्ना नेताहरूको तस्बिर राख्दै आएको थियो। विधान महाधिवेशनको मुख्य मञ्चमा पार्टीका पुराना नेताहरूको तस्बिर गायब पारिएको छ । भ¥ण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको एकल स्वामित्वको दाबी गर्ने गरेको एमालेले उनकै अबमुल्यन गरेको देखिन्छ ।
जनताको बहुदलीय जनबाद प्रति¥पादन गर्ने भण्डारीको समेत अबमुल्यन गरेर कार्यक्रम स्थलको सजावट हेर्दा भण्डारीको स्थानमा ओलीवाद हाबी देखिएको छ ।कार्यक्रम स्थल बाहिर होस् या भित्र ओलीलाई ब्रान्डिङ गर्ने प्रयास कतै छाडिएको छैन।
कार्यक्रमको हल बाहिर वि¥भिन्न स्थानमा ओलीको कट आउट राखिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र पछि ओली गाथाले भरिएको भिडियो डकुमेन्ट्री प्रदर्शन भएको थियो।
सो भिडियोलाई मुख्य प्रचा¥र सा¥माग्री बनाउन महाधिवेशनमा सहभागी सबैको मोबाइलमा पठाउने कार्यक्रमका सञ्चालक प्रदीप ज्ञवालीले कार्यक्रम हलमै जानकारी गराएका थिए।कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई दिने पानीको बोतलमा समेत ओलीकै ब्राण्ड बनाइएको छ । त्यतिमात्र होइन महाधिवेशन प्रतिनिधि बोक्ने गाडीमा समेत ओलीको फोटो झुन्ड्याईएको छ ।